ဆရာကြီးလား ဘာလားဆိုသူများသို့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဆရာကြီးလား ဘာလားဆိုသူများသို့…
Posted by ကို ထွဋ် on Oct 25, 2016 in Creative Writing, Think Different | 19 comments
-တကယ်တော့ ဒီပို့စ်က ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ထားတာပါ…
-အချိန်နည်းနည်းအားတာနဲ့ နေ့လည်စားထမင်းချိုင့်ကို လင်မယားနှစ်ယောက် ဦးသူဆေးနေကြပါ…
-တရက်ကျတော့ ရုံးထဲက တယောက်က ချိုင့်ဆေးတာ မိန်းမတွေအလုပ်လေတဲ့…
-ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ ပြောပါတယ်… ဒါဆို ကျွန်တော့်မိန်းမ ဘာလို့ အလုပ်လာလဲလို့…???
-ယောကျာင်္းအလုပ်ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရှာတာကို မိန်းမက လိုက်လုပ်နေရတော့ မိန်းမအလုပ်လို ဖြစ်နေတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ချိုင့်ဆေးခြင်းကို ကျွန်တော်လုပ်တာ မျှတပါတယ်…
-“နားတော့ နည်းနည်းခါးမယ်ဗျ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ကြီးဒေါ်နွားကျောင်းချင်သူများတချို့အတွက်တော့… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရော အောင်မြင်တဲ့ မိသားစုတခု တည်ထောင်နိုင်ပြီလား အရင်မေးပါ… မိသားစုအတွက်၊ မျိုးဆက်အတွက် ဘာ Plan တွေ ဆွဲထားပြီလဲ… သူလိုကိုယ်လိုနဲ့တော့ ဂိုက်လာမဖမ်းပါနဲ့….
-ကိုယ်လင်ကိုယ်မယားကွယ် အဆင်ပြေပြီး လင်အလုပ် မယားအလုပ်မခွဲခြားတာပဲ မှားနေသလိုလိုနဲ့… ဒါဆို ပြန်မေးမယ်… ကိုယ်တိုင်ကရော တာဝန်ကျေလို့လား… ခုခေတ်က ဖခင်တယောက်တည်းလုပ်စာနဲ့ တအိမ်လုံး စားလောက်တဲ့ ခေတ်မဟုတ်ဘူးလေ… လင်ရောမယားရော ဒိုးတူပေါင်ဖက်လုပ်နေရတာလေ… အလုပ်သွားလဲ အတူတူ အလုပ်ပြန်လဲ အတူတူကို အိမ်ရောက်တော့ ငါဟဲ့ယောကျာင်္း အိမ်ခေါင်းရင်းမှာ အိမ်ဦးနတ်ဆိုပြီး မိန့်မိန့်ကြီးထိုင်နေလို့ သင့်တော်မလား…??? လောက်ငအောင် ရှာပေးနိုင်တောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး…သူပန်းကန်ဆေးရင်တောင် ကိုယ်က ရေစစ်ပေးတာ… သူအ၀တ်လျှော်ရင်တောင် ကိုယ်က ကူလှမ်းပေးတာမျိုးက ဘာပင်ပန်းလဲ??? ဘယ်လောက် အချိန်ပေးလိုက်ရလို့လဲ…??? အဲလိုမဟုတ်ရင် ဘာလို့ လင်မယားလုပ်ဦးမလဲ… တဦးတည်းသီးသန့်နေပေါ့…
-အိမ်ထောင်တခုတည်ထောင်ပြီ ၂ ဦးပေါင်းဖက်ပြီဆိုကတည်းက ကျွန်းကိုင်းမှီ ကိုင်းကျွန်းမှီပေါ့… ဒါမျိုးကျတော့ မလုပ်ချင်ဘဲ ချစ်တယ် ချစ်တယ် ပြောတယ်ဆိုရင်တော့ သူ့အချစ်က အတ္တအချစ် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကို ပိုချစ်တဲ့ အချစ်ပဲ ဖြစ်မယ်… ဒါမျိုးကို သဘောကျနေတဲ့၊ သဘာဝတရားပဲလို့ထင်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ(ကြီးဒေါ်တွေ) Wake Up!!! ဒါက မဟာပုရိသတွေ အုပ်စိုးတဲ့ ခေတ်၊ နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး… သိပ်ခေတ်မှီတဲ့ အားအရမ်းကျနေရတဲ့ သူများနိုင်ငံတွေမှာ အဖေက မနက်စာပြင်ပေးနေတာ၊ ကလေး ကျောင်းလိုက်ပို့ပေးတာတွေ အတုယူကြစမ်းပါ… ကိုယ်သက်သာရင်ပြီးရော မိန်းမကို မညှာရင်… အဲဒီမိန်းမက ကိုယ့်ကိုယူပြီး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ကိုယ်စရိတ်နဲ့ကိုယ် သံဝါသ လာအပြုခံတာပေါ့ ဟတ်လား… စဉ်းစဉ်းစားစားလဲ ပြောကြပါဗျာ… ဒါကိုမှအချစ်ပါဆိုပြီး ဇွတ်ငြင်းရင် တခွန်းပဲ ပြောမယ် (ဆီပုလင်းခါးထိုးအချစ်)လို့…
-ps: စကားလုံး နည်းနည်းကြမ်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ… ဒါမှလဲ မြင်တော့မှာလေ…
တဦးနဲ့ တဦး နားလည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Happy Family ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်…
မိဘလုပ်သမျှ သားသမီးက ကြည့်ထားပြီး ပြန်လည်ပြုမူတတ်လို့ ကိုယ့်ကောင်းမှ မျိုးဆက်ကောင်းမယ်လို့ သိထားပေးပါ…
– ခုကတည်းက အဲလို Relation မတည်ဆောက်ထားရင် အသက်တွေကြီးလာလို့ သူလဲ မလုပ်နိုင် ကိုယ်လဲ မလုပ်နိုင်အချိန်မှာ တယောက်နဲ့ တယောက်ပဲ နားလည်တော့တဲ့ တချိန်မှာ သူလုပ်နေတာ ကိုယ်မကြည့်ရက် ကိုယ်ကလဲ လုပ်သားမကျရင် သူ့ကို ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေမှာပေါ့… သူအတွက်လဲ ချိုမြိန်ဖွယ်အချစ် ဘယ်ဖြစ်မလဲ… သားသမီးတွေ ကိုယ်စီအိမ်ထောင်ကျ အိမ်ခွဲနေသွားရင် ကျန်ခဲ့မှာ ကိုယ်လေ အဘိုးကြီး အဘွားကြီး လင်မယားလေ… အဲအချိန်သူက ထမင်းစားဖို့ ခူးခပ်နေချိန် ကိုယ်က လက်ကလေးရေဆွတ်ပြီး ထိုင်စောင့်နေလို့ ဘယ်ဖြစ်မတုန်း… ပန်းကန်လေးကိုင်ပြီး သူ့ဘေးနားရပ်နေပေးတာ ပိုပြီး ချစ်ချင်စရာကြင်နာချင်စရာ မကောင်းဘူးလားဗျာ…
အင်းလေ.. ချိုင့်ဆေးက မိန်းမတွေအလုပ်ပဲ..။
အဲသလို ပြောရင်တော့ လက်ခံသပေါ့… သို့သော် ကျွန်တော့်ကို လက်ကြောမတင်းဘူးလို့ နှိမ်တဲ့ သဘော မဖြစ်ဘူးလား…
တဖက်သားသက်သာအောင် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်.. ၀င်ကူပေးတာ.. မဟုတ်လား..။ ကိုယ့် လေဒီမှမဟုတ်.. ဘယ်သူ့ကို မဆိုကူပေးလို့ရတာပဲ..။
ဘေးက.. ငထွားခါးဝင်နာနေရအောင်.. ဘာများတော်နေသလဲတော့မသိ..။
အော် တဂျီးပြောသလို “ဟဲ့ မိန်းမကို ဆေးခိုင်းလေ ယောကျာင်္းလေး ဆေးတာထက် မိန်းကလေးဆေးတာ ပိုပြောင်တယ်လို့” ပြောရင် လက်ခံတယ်လို့… တဖက်က ကျွန်တော့်ဘက်ကနေကျတော့ ချိုင့်ဆေးတာလေးတောင် အဖြစ်မရှိတဲ့ကောင်လို့ အပြောခံရသလို ခံစားမိတယ်လို့… ဟင်းချက်တာတော့ ထားပါ မိန်းမတွေ သာချင်သာမယ်… ချိုင့်ဆေးတာတော့ဗျာ ယောင်္ကျးလေးတွေဆေးလဲ ပြောင်ပါတယ်ဗျ…
ဟုတ်ပါ့ တဂျီးရယ် နိုင်သလောက်ကူတာပဲ.. အဲအချိန် ကျွန်တော် တနေကုန်ထိုင်နေရတာကနေ အကြောအချင်ပြေမယ်… ပြီးတော့ မျက်စိနားချိန်ရတယ်… ဘယ်လောက်တောင်မှ ခန္ဓာကိုယ်ကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းလိုက်သလဲ တကယ်ဆို မိန်းမက တမင်ပေးဆေးခိုင်းရင်တောင် ကျေးဇူးတင်သင့်တာ… :)အဲကြောင့် ကျွန်တော်လဲ ၀င်အောင်းတဲ့သူကို ထောင်းပစ်လိုက်တာ လိုက်ခ်တောင် လာမပေးရဲတော့ဘူး… ဟီး…
အဲ့လို အတွေးအခေါ်နဲ့ အဲ့လို လာပြောတာကမှ မိန်းမလိုမိန်းမရကွ လို့ ပြန်ပြောပစ်မှာ
မိန်းမအလုပ် ယောက်ျားအလုပ် ခွဲစရာ မလိုတဲ့ နားလည်မှုနဲ့ တယောက်ကိုတယောက် သက်သာအောင် ကူနေတာကိုတောင် မတွေးတတ်ဘူးနော် အဲ့လိုလူ ရှိတာ အံ့ရော။
ကျနော်ဖြင့် အမေ့အိမ်ကနေ ချိုင့်ဆွဲပြီး အလုပ် လုပ်တော့လည်း ကိုယ်စားတဲ့ချိုင့် ကိုယ် ဆေးတာပဲ။ အိမ်ရောက်မှ အမေ ဆေးရင် အမေလည်း ပင်ပန်းတယ်။ ကိုယ်စားတဲ့ချိုင့်လည်း ထမင်းသိုးနံ့ထွက်တယ်လေ။
မိန်းမ ရဖြစ်ရင်လည်း ကိုယ့်ချိုင့်တော့ ကိုယ်ဆေးမှာပဲ။ တတ်နိုင်တာ ကူရမှာပဲ။
သားသမီးတွေ ရလာရင်လည်း ကိုယ်စားတာ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ဆို ကိုယ် တာဝန်ယူကြဖို့ သင်ပေးမှာပဲ။ (သားသမီးတွေ မိန်းမတွေတောင် စကားထဲ ထည့်ပြောနေသေး တယ်ဟုတ်တဲ့ငါ။)
ကြည့်ရတာ အဲ့လူက ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းကပြန်လာရင် ကိုယ့်ချိုင့်ကိုယ် မဆေးခဲ့ရဘူးထင်ရဲ့။
မိဘတို့ မိန်းမတို့ကို ဘယ်လောက် ကူဖော်လောင်ဖက် မပြုခဲ့သလဲ
ဘယ်လောက် လက်ကြောမတင်းသလဲ ဆိုတာကို ပေါင်လှန်ထောင်းပြတယ်ပဲ မှတ်ရမ်
ယောကျာင်္းလေးတွေချည်း ဟုတ်ဘူး… မိန်းမတွေကလဲ အကိုအဲလိုဆေးတာကို အဲဒါ မိန်းမကို ဆေးခိုင်းလေလို့ ပြောတာ… မိန်းမလဲ အလုပ်လုပ်လို့ ပင်ပန်းတာပဲလို့ ပြောတော့ ယောက္ခမပါ အဆစ်ပါလိုက်သေး… ယောက္ခမဆိုတာလဲ တနည်း မိဘပဲဆိုတာ သူတို့သိအောင် ပြောဖို့ဆွာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စတော့ ဟုတ်ဘူး…
ကျေးဇူးပါဗျာ… ထောက်ခံပေးလို့… တကယ်တော့ သူတို့က ဒီမိုကရေစီခေတ်သာ ပြောနေတယ်… သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ဆွဲနေတာ… အနော်ကတော့ မလုပ်ဘောင် ချစ်လို့ ယူထား ခိုင်းဖို့မှ မဟုတ်တာ…
ဟုတ် အန်ကယ်ကြီး… အလိုက်သင့်အလယ်သင့် နေနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာကို ရှေးရိုးစွဲတွေက လာနာနေကြလို့ဗျ…
ကျုပ်အသက်က ၅၀ စွန်းပြီ..
အဲဒီတော့… အိမ်မှာတော့ အလျှင်းသင့်သလို-
အဲဒါ လူ နဲ့ တူတာပေါ့…
လေးစားပါတယ်… ဦးဦးပါလေရာ… အဖေဆိုလဲ အမေရှိစဉ်က လုံချည်တောင် လျှော်ပေးပါတယ်… ဘုန်းနိမ့်တာတွေ ဘာတွေထက် သူမှ မလုပ်နိုင်တာ သားသမီးတွေကိုလဲ ဒုက္ခမပေးချင်တော့ သူ့ဘာသာသူလျှော်တယ် ဘာဖြစ်လဲ… အမေကလဲ အဖေကို အားတွေနာပြီး ပိုလဲ တယောက်နဲ့တယောက် ဖေးမမှုတွေ အချစ်တွေ ပိုတိုးတာပေါ့ဗျာ… အဲဒါတွေကို တလွဲတွေးရင်တော့ အသက်သာဆုံးစကားကတော့ တကယ်ကို ကိုယ့်ရဲ့အိမ်သူကို သိပ်မချစ်လို့ဘဲလို့ ပြောပါရစေ…
မိန်းမကမွေးမှ… လူဖြစ်ရတဲ့ယောကျာ်းတွေ.. ဘုန်းနိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကား.. ဘယ်လိုပြောထွက်နေသလဲတော့.. မသိ..။
”ဘုန်းတော်ကြောင့် ဘာမှ မသိကြောင်းပါ”
ဆရာအော်ပီကျယ် ကာတွန်းထဲက စာသား။
ကျားတွေက မတွေထက် ဘုန်းကြီးတယ်
.ယောကျာ်းတို့ဘုန်း လက်ရုံး ဘာညာ
အဲ့ဒါတွေ အရပ်ထဲက လူငယ်တွေကအစ သိပ် အခေါ်အပြော လုပ်နေကြတာပဲ။
ကျနော်က အဲ့ ဘုန်း ဆိုတာကြီး ဘယ်လို နိမ့်တယ် မြင့်တယ် ကြီးတယ် သေးတယ် ဆိုတာကို ကိုင်ပြပါလားလို့ မေးလို့ ပြသနာ ဖြစ်ဖူးတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံသားတွေက အလုပ်ရှုပ်ပြီးမိဘအိပ်ရာ မခင်းမိလိုက်ရင် ကိုယ်တိုင်ခင်းပေးတယ်။
အပြန်အလှန်နားလည်မှုပေါ့ အန်တီအေးရယ်… တယောက်နဲ့ တယောက် တွက်ချက်နေကြရင် ပျော်စရာမကောင်းသလို အိမ်ထောင်တခုဘာလို့ တည်ဆောက်နေဦးမလဲ နော့… ကိုယ့်ဘာသာ တယောက်တည်း နေရောပေါ့…